काठमाडौं- स्तन क्यान्सरलाई जितेकी शुभेच्छा घिमिरेले फेसबुक लाइभबाट आफ्ना अनुभव सुनाएकी छिन्। बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छँदाकी उनकी साथी टिनेट कोर्ट्सले शनिबार सञ्चालन गरेको फेसबुक लाइभ कार्यक्रममा उनले आफ्ना अनुभव सुनाएकी हुन्। यस्तो छ उनको अनुभव :
म ३२ को थिएँ, जब मलाई क्यान्सर लागेको छ भन्ने थाहा भयो। त्यो समयमा ममा कुनै पनि लक्षण थिएन। बाहिरी रूपमा म पूर्ण रूपमा स्वस्थ अवस्थामै थिएँ। तर त्यसपछि भने क्रमशः मेरो स्तन पहिलाको जस्तो सामान्य नभएको जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि मैले निरन्तर विभिन्न डाक्टरहरूसँग सल्लाह गर्न थालेँ। यसको बारेमा धेरै खोज पनि गरेँ। यस्तो रोग अचानक देखा पर्दा हामी एककिसिमले आँत्तिएका पनि थियौ। जब मलाई स्तन क्यान्सर भयो भन्ने थाहा पायौं त्यसपछि मैले डाक्टहरूको सल्लाहानुसार किमो थेरापी र रेडियो थेरापीको साहारा लिएँ।
क्यान्सरका विषयमा धेरै खोज भएपनि क्यान्सर यही कारणले हुन्छ भन्ने उचित कारण पत्ता लागिसकेको छैन। तर पछिल्ला दिनहरूमा क्यान्सरलाई जित्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। क्यान्सरका धेरै प्रकारहरू हुन्छन्। र तिनका उपचार पनि फरक फरक नै छन्। मेरो चाहीँ दाहिनेपट्टीको स्तनमा क्यान्सर भएको थियो। त्यसका लागि हामीले किमो थेरापी र रेडियो थेरापीको साहरा लिएर त्यसको उपचार गर्दै गयौं। क्यान्सर बिस्तारै बिस्तारै शरीरको अन्य भागमा पनि नजानिँदोसँग फैलन सक्छ। किमो थेरापीले शरीरका राम्रा र नराम्रा दुवै कोषहरूलाई निस्क्रिय गर्न मद्दत गर्ने भएकाले त्यसले अन्य स्थानमा क्यान्सर फैलन नदिन धेरै सहयोग गर्छ।
किमो थेरापीसँगै मैले रेडियो थेरापी पनि गरेँ। यसले शरीरभित्र भएका क्यान्सर सेलहरूलाई मार्ने काम गर्छ।
मलाई गर्व लाग्छ कि अहिले विश्वमा धेरै राम्रा राम्रा मेडिकेसनहरू बनेकोमा मलाई गर्व महसुस हुन्छ।
सामान्यतया अपरेसनको केही सातापछि किमो थेरापी सुरू गरियो। त्यसपछि रेडियो थेरापी पनि सुरू गरियो।
यो सबै गरिसकेपछि मलाई पूर्णरूपमा निको हुन सामान्यभन्दा केही बढी समय लाग्यो। जब म सामान्य अवस्थामा आएँ त्यसपछि शारीरिक र मानसिक रूपमा भिन्नै किसिमको ऊर्जा आउन थाल्यो।
क्यान्सरलाई जित्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफैंलाई सुन्नु हो। मेरो सन्दर्भमा भन्दा मैले शरीरको आवश्यकताअनुसार आराम गरेँ। त्यो समयमा आफूलाई क्यान्सर भएको छ भन्ने भावना दिमाग खेलाएर मनोबल झन् कमजोर बनाउनुभन्दा यसलाई म जित्न सक्छु भन्ने सोचका साथ अघि बढ्ने र शरीरले धान्न सक्ने सामान्य काम गर्नाले पनि धेरै राम्रा ऊर्जा प्रदान गर्छन्। जब मैले क्यान्सर भएको थाहा पाएँ त्यसपछि ‘यो मेरो गल्तिले भएको होइन, लाग्ने कुरा लागिसक्यो अब यसलाई कसरी जित्ने’ भन्ने विषयमा मात्र सोच्न थालेँ। सकारात्मक सोचाइले पनि मलाई निको हुन धेरै नै मद्दत गर्‍यो। यसमा मलाई मेरो परिवारले धेरै नै सहयोग गर्नुभयो, जसका कारण पनि म आज यो स्थितिमा छु। ‘हामी तिम्रो साथमा छौं, तिमी चिन्ता नगर’ भन्नेजस्ता हौसलाहरू दिइरहनुहुन्थ्यो।
त्यो समयमा मलाई रीस उठेको बेलामा म रिसाइदिन्थेँ। जब मलाई रून मन लाग्थ्यो म रोइदिन्थेँ। मनमा आएका यस्ता भावनालाई रोक्दैन थिएँ। पुनः भन्छु शरीरले के भन्छ त्यो सुन्ने गरौं। हरेक क्यान्सरका प्रकृति फरक फरक हुने भएकाले हामीले आफ्न शरीरलाई बुझ्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
नकारात्मक सोचले हामीलाई मानसिक र शारीरिक दुवैलाई पीडा दिन्छन् त्यसैले हामीले चिन्ता र तनावलाई घटाउँदै ‘म यसलाई जित्न सक्छु’ भन्ने सोच राख्नुपर्छ। मेरा लागि भने किमो थेरापीले धेरै नै राम्रो काम गर्‍यो।
त्यहीबीचमा म घरमा गएँ र हजुरआमालाई आफ्न सबै कुराहरू गरेँ। उहाँले यस्तो बेलामा प्रयोग गरिने आयुर्वेदिक उपचारहरू सुझाउनुभयो। त्यसले पनि मलाई धेरै राम्रो काम गर्‍यो। त्यसले पनि मेरो क्यान्सर निको हुनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।
हाम्रो जीन्दगीमा धेरै कुराहररू चलिरहेका हुन्छ। कतिपय कुरालाई हामी पराजित गर्न सक्छौं भने कतिपयलाई सक्दैनौं। मेरा लागि दुईवटा विकल्प थिए। एउटा, नियतीलाई पुकार्ने अर्को भन्ने म जित्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास लिने। मैले भने ‘म यसलाई जित्छु’ भन्ने सोचाइलाई आत्मसाथ गरेँ। यदि हामी यसमा सकारात्मक हुन सकेनौं र हाम्रा वरिपरिकाले पनि आफ्ना अगाडि सकारात्मक कुराहरू गरेनन् भने मानसिक रूपमा पीडा बोध हुन्छ। ममा आत्मबल बलियो भनएकाले पनि म स्वस्थ व्यक्तिजस्तै देखिन्थेँ। मेडिकल टिमसमेत म यति छिटै निको भइरहेको देखेर चकित पर्थे।
क्यान्सर लागेको भन्ने थाहा पाएपछि मैले जीवनशैलीमा ध्यान दिएँ। त्यसमा पनि मैले हरेक दिन खाने खानालाई विशेष रूपमा ध्यान दिएँ। स्वस्थकर खाना खान्थेँ। म मांसहारी हुँ तर त्यसलाई मात्र फोकस गरिनँ। स्थानीय रूपमा फलेको कुरा खानु नै हाम्रा शरीरका लागि फाइदाजनक हो भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको छु।
यसलाई जित्नका लागि जीवनशैलीको उचित परिवर्तन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसमा पनि
1. मानसिक रूपमा तन्दुरूस्तता,
2. जीवनशैलीको उचित सुधार
3. शारीरिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै दैनिक रूपमा योग गर्ने, स्वस्थ र सफा खाना खाने, प्राणायम गर्ने, एकाग्रताका साथ कुनै एकै विषयमा ५ मिनेटसम्म हेर्ने अथवा सुन्ने जसले गर्दा ध्यान कतै नभाडियोस्। एकै कुरामा ध्यान दिँदा पनि त्यसले मानसिक रूपमा बल प्रदान गर्छ।)
सकारात्मक जीवनशैली नै यसको उपचारका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। प्राणायमले पनि धेरै नै सहयोग गर्छ। यसलेले नकारात्मक भावनालाई कम गर्नेदेखि हामीले फेर्ने हरेक सासमा नियन्त्रण राख्न धेरै मद्दत गर्छ।
विशेषतः स्तनलाई महिला हुनुको पहिचानको रूपमा चिन्ने गरिन्छ। स्तन क्यान्सर पुरूषमा पनि हुन सक्ने भन्ने विषयमा संसारमा धेरै अनुसन्धानहरू भएका छन्। यदि तपाईंको शरीरमा केही पहिलाको भन्दा केही असामान्य कुराहरू भइरहेका छन् भने डाक्टरलाई देखाउनु उचित हुन्छ। यदि हात वरिपरि, काखी मुनीतिर छालाको रङ परिवर्तन हुनेजस्ता लक्षणहरू देखापर्न थाले भने तुरून्तै डाक्टरकोमा गएर सल्लाह लिनु उचित हुन्छ। मैले भोगेका कुराहरू समाजका सबै आमा, हजुरआमा, दिदी, बहिनीसँग साट्न चाहन्छु। विश्वमा ४०-५० वर्षअघिको जस्तो अवस्था अहिले छैन। धेरै कुराहरू विकास भइसकेका छन्। तर पनि उपचारका प्रक्रियाहरू भने धेरै कठीन हुने गर्छन्।
पहिला किमो थेरापी गरेकाले मलाई मानिसहरूले आमा बन्न नसक्ने कुराहरू सुनाउँथे तर अहिले म आमा बनेकी छु। यसमा समाजको पनि धेरै नै हात हुन्छजस्तो लाग्छ। समाजले पनि क्यान्सर भएकाहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
उपचार भइरहँदा मैले जीवनशैलीमा विशेष ध्यान दिएँ। त्यसपछि पनि किमो थेरापीले गर्दा केही खान मन नलाग्ने, पानीसम्म पनि पिउन मन नलाग्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा हामीले हाम्रो दैनन्दिनीय जीवनशैलीमा विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। किमो थेरापीका बेलामा मैले आफूलाई पाच्य हुने स्वस्थकर खानेकुरामात्र खाएँ। फलफूल, तरकारी जुसहरू पिएँ। जसले गर्दा पनि मलाई तन्दुरूस्त रहन धेरै नै मद्दत गर्‍यो।
उपचार सकिएपछि मैले डेरी प्रोडक्टहरू त्यागेँ। आयुर्वेदिक र ट्रेडिसनल खानेकुराहरूमात्र खान थालेँ। धेरै तैलीय पदार्थ भएका खानेकुरा खाइनँ।
हामीले हाम्रा पूर्वजले गर्दै आएका प्राकृतिक उपचारको कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ, जसमा कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। सन्तुलित खाना खानका लागि मैले सबैलाई सुझाउने गर्छु। सफा र स्वस्थकर खानाले स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछ। खानामा ध्यान दिनु मेरा लागि स्वस्थ हुनुको अर्को कारण बन्यो।
क्यान्सर भएकाले कुन कुरा खाने कुन नखाने भन्ने बारेमा विश्वमा धेरै विवादास्पद अनुसन्धानहरू भएका छन्। मेरो सन्दर्भमा भने मैले ती कुराहरूलाई त्यागेँ जसबाट मेरो शरीरलाई हानी पुर्‍याउँथे। शरीरलाई हानी पुर्‍याउने वस्तुहरू शरीरमा प्रयोग गर्नाले पनि शरीरका धेरै कुराहरू बिग्रने गर्छन्। त्यसैले केमिकल मिसाएका फेसियल कुराहरू नलगाउदा उचित हुन्छ।
क्यान्सरलाई जितेपछि एउटा पुस्तक सार्वजनिक गरेँ- ‘क्यान्सर करी एन्ड मी’ जसमा तीन भाग छन्। प्रथम भागमा मैले उपचारका बेलामा भोगेका अनुभव साटेकी छु। दोस्रो भागमा उपचारका क्रममा मैले अपनाएको जीवनशैली र खाएका खानेकुराका बारेमा लेखेकी छु भने अन्तिम भागमा उपचारपछि मैले भोगेका अनुभव र अपनाएको जीवनशैलीलाई उतारेकी छु। क्यान्सर पीडितलाई मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुझाव भनेको आफ्नो शरीरलाई सुनौं, सकारात्मकतामा ध्यान दिऔं किनकी जीवन धेरै नै सुन्दर छ। यो जीवनलाई खुसीसाथ बिताऔं।स्वास्थ्यखबर